China DAM3-160 MCCB Case Case Circuit Breaker ifektri abakhiqizi | I-DaDa
I-DAM3-160 MCCB Case Circuit Breaker Ephukile
Ukubuka konke kwe-DAM3-160 MCCB Case Case Circuit Breaker
Amandla we-insulation wokulinganisa we-Dada DAM3-160 breaker circuit breaker angafinyelela ku-100V. Le mishini kagesi ifanele amasekhethi wokusabalalisa amandla nge-current eshintshanayo engu-50-60Hz, amandla okusebenza alinganisiwe afinyelela ku-750V, futhi alinganiselwa ukusebenza kwamanje kusuka ku-10A kuya ku-100A. Ukwephula isekethe kudlala indima ebalulekile ekusabalaliseni amandla nasekuvikeleni isekethe nemishini yamandla ekulayisheni ngokweqile, kumasekhethi amafushane, nasekulimaleni kokungaphumi kwamandla. Zingasetshenziswa futhi kuma-motors kagesi ukuvikela okungapheli nokulayisha ngokweqile kanye nokuvikelwa ekujikelezeni okufishane nezimo zokungasebenzi.
Uma kuqhathaniswa nochungechunge lwe-DAM1, uchungechunge lwe-DAM3 lwenzelwe ivolumu encane, amandla okuphuka aphezulu, okunikeza ukonga amandla okwengeziwe.
Amapharamitha kagesi we-DAM3-160 Case Circuit Breaker Breaker
Kukalwe njengamanje ngosayizi wohlaka U-Inm [A]
Kukalwe njengamanje [A]
Kukalwe umfutho olinganiselwe ukumelana nogesi we-Uimp [KV]
Kulinganiswe ngo ukwahlukanisa voltage Ui [V]
Amandla okuhlola kumvamisa wezimboni ngeminithi elingu-1 [V]
Kukalwe isilinganiso sokuqhekeka kwesikhashana esifushane se-Icu [KA]
(DC) 250V-2 Amapulangwe ochungechungeni
(DC) 500V-2 Amapulangwe ochungechungeni
(DC) 750V-4 Amapulangwe ochungechungeni
(DC) 1000V-4 Amapulangwe ochungechungeni
Kulinganiselwe ukuthi amandla okusetshenziswa kwesikhashana afushane, i-Ics [KA]
isigaba sokusetshenziswa (EN 60947-2)
I-IEC / EN 60947-2 / GB 14048.2
Amapharamitha aphathekayo we-DAM3-160 Case Circuit Breaker Breaker
Uhlobo olulungisiwe lobukhulu obuyisisekelo
3/4 Izinkomba W [mm]
3/4 Izinkomba H [mm]
3/4 Izinkomba L [mm]
Okungaguquki okungu-3/4 Poies [Kg]
I-plug-in 3/4 Poies [Kg]
Donsela ngaphandle 3/4 Poies [Kg]
I-breaker yesekethe ye-DAM3-160molded cut cut ngokuzenzakalela okwamanje lapho i-current idlula isilungiselelo sokukhishwa. Icala elibunjiwe libhekisa kwisivikelo sepulasitiki esisetshenziswe njengohlaka lwedivayisi ukuvimba umqhubi kanye nekhonsoni yensimbi
Qaphela: Imininingwane yomkhiqizo ifakiwe.
Izinzuzo Zenzuzo Yakho
Ihlangene (Ilondoloza isikhala)
Akunakuhlulwa uma kuziwa ekongeni isikhala: Ebangeni lama-breaker wesekethe, i-DAM3 incane kakhulu ekilasini labo ngakho-ke ingasebenzisa isikhala sokusabalalisa esibaluleke kakhulu, kungakhathalekile ukuthi sisetshenziselwa ukusatshalaliswa kwamandla kagesi noma njengesivikelo samandla angenayo ezakhiweni zokuhlala noma ezisebenzayo.
Usayizi wozimele we-160 uqhathaniswa nomunye umkhiqizo, mancane kakhulu kepha anamandla.
Ngaphansi kwesihloko esithi "Izindlela zokunciphisa ubungozi uma kwenzeka ukwehluleka",
Ukuphepha kwe-IEC 60204-1 Ukuphepha Kwemishini Yokusebenzisa Imishini kagesi kufaka phakathi izincomo ezilandelayo:
"-ukusetshenziswa kokushintsha amadivayisi anokuvula okuqondile (noma okuqondile) okuvula ukusebenza."
Ubungozi bokuthinta izingxenye ezibukhoma bancishisiwe ngokwakhiwa.Lezi zici zinciphisa ubungozi bokuthinta izingxenye ezibukhoma:
Azikho izikulufo zensimbi eziveziwe ebusweni bangaphambili
Ukuvikelwa kwe-IP20 kumatheminali
Ukuvikelwa kwe-IP30 lapho kuguqulwa
Uma ukuguqulwa kuphulwe ngengozi noma ukusetshenziswa kabi, ayikho ingxenye ebukhoma evezwe
Azikho izingxenye ezibukhoma ezivezwa lapho kufaneleka izesekeli
Ukuphepha kokubonakalayo (iwindi lokukhomba)
Izinkomba ezinemibala zibonisa isimo se-ON noma se-OFF. Izinkomba zimbozwe ngokugcwele uma i-breaker ihamba, futhi okumnyama ukuphela kombala obonakalayo.
Valiwe (O) Vuliwe (I) Ngisikiwe
Ukuqala okusheshayo amanani we-thermal and magnetic tripping asevele elungisiwe.
Uchungechunge lwe-DAM3 kulula ukubamba futhi luvumela ukufakwa okusheshayo lapho kwenziwa imisebenzi yakho.
Ukubamba ku-35mm DIN Rail (i-patent ivikelwe)
Ifakwa kalula ngemuva kwezinhlobo ze-2/3 pole DAM3-160 ukuvumela ukufakwa kwesiqeshana kwesitimela se-MCCB kuye ku-35mm DIN.
Okubenza bakulungele ukukhweza eceleni kwamadivayisi we-modular kumabhodi okusabalalisa.
Ibhokisi lokusabalalisa Ibhokisi lokusabalalisa Ibhokisi lokusabalalisa
Ngokuhambisana namazinga we-IEC / EN 60947-2 kanye nezinga lokungcola III (IEC / EN 60947) asigcini nje ngokuqinisekisa okokusebenza kepha nangamanani angabonakali ochungechunge lwe-DAM3 circuit breaker. Futhi ngochungechunge lwethu lwe-DAM3, sikhombisa ukucabangela imvelo njengoba lawa ma-breaker wesekethe ahambisana nemiyalo ye-RoHS futhi ingavuselelwa kabusha ngezinga elikhulu. Okokugcina kodwa - ingubo yesitayela yochungechunge lwe-DAM3 kudizayini ehlukile ye-CDADA yenza le mikhiqizo ihehe hhayi nje kuphela kwezobuchwepheshe kepha futhi nasendaweni yokubuka yobuhle.
Encane futhi Enamandla
I-DAM3-160 inikeza ukuvikelwa ngemisinga elinganiselwe efinyelela ku-160 A no-36 kA umthamo wokuqhekeka, ngaphandle kwesisindo sayo esincane nobubanzi obuzacile bamamilimitha angama-25 kuphela ngepali. Inkanyezi engaphakathi komndeni ohlukanisa isifunda, iyatholakala njengedivayisi engu-2, 3 noma 4-pole. Ukuqala okusheshayo amanani we-thermal and magnetic tripping asevele elungiswe yi-CDADA.Futhi inesikhathi eside ngokwedlulele sempilo engafika kumijikelezo yokusebenza kwemishini eyi-10,000. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yesembozo sayo sokugcina, i-DAM3 ifaka i-IP 10 degree of protection.
Izinketho eziningi zokufaka
Ubheke phansi noma uvundlile? Kukuwe ukuthi ufisa kanjani ukufaka i-DAM3.Kodwa noma ngabe isikhundla siphi esikhuphukayo kanye nohlangothi olukhetha ukunikezwa kwamandla, luzohlala luhlinzeka ngomsebenzi ogcwele wokuvikela.
Ukulungiswa Kwentambo: Ikhebula le-Cable lug nebhokisi
Intambo eqinisekisiwe enezikulufo ze-M8 nobuchwepheshe bebhokisi lokugcina ukukhwezwa okusheshayo nokulula: womabili afakiwe ebangeni elijwayelekile lemikhiqizo.
Izixazululo Zenziwe Ukukala
Ukukhubeka kude, okukhombisa isimo sokushintsha noma ukukhishwa kwamandla angaphansi kwamandla uma kwenzeka izicelo ezifanele zokuphepha konke lokhu kulula ukuphatha i-DAM3.Sibonga uhla oluphelele lwezesekeli, i-DAM3 ngeke ibe ngumdlalo ophelele wezinhlelo zokusebenza ezijwayelekile, kepha futhi nesisombululo esifanele sezidingo zokuphatha ngazinye.
Uma ucela i-DAM3 iyatholakala ngesibambo esijikelezayo (sokufaka ngqo noma ukuhlangana komnyango).
Izici / Izici
Kulinganiswe ngo-16A wamanje kufika ku-160A
Ukwephula Amandla: 12, 18, 25, 36 kA
Ukulungiswa kwekhebula: Ikhebula le-lug M8 noma i-Box Terminal
Izigxobo ezitholakalayo: 2pole, 3pole, 4poles
Ilinganiselwe i-Voltage: 400 / 415V, 50 / 60Hz
3-Isikhundla isigwedlo: Off-Trip-ON
Ukuphakelwa Kukagesi: Ulayini noma Umthwalo Ohlangothini
Oxhumana naye ophambili we-DAM3-160 icala lesifunda elibunjiwe ukuphathwa ngesandla noma ukuvalwa kukagesi. Ngemuva kokuthi oxhumana naye omkhulu avaliwe, inqubo yokukhipha mahhala ikhiya oxhumana naye oyinhloko endaweni yokuvala. Ikhoyili yohambo olweqile kanye ne-thermal element element zixhunywe ngochungechunge nesekethe enkulu. Ikhoyili yohambo lokungasebenzi kanye namandla kagesi axhunywe ngokufana.
Usayizi we-DAM3-160 case molded breaker
Yonke imikhiqizo enikezwe kusuka kule khathalogi inesiqinisekiso ngokuqhathaniswa nokukhubazeka ezintweni nasekwenzeni umsebenzi isikhathi esiyizinyanga eziyi-12 kusukela ngosuku lokuthenga njengokujwayelekile.
I-CDADA inegunya le-ISO 9001 lokwenziwa, ukudayiswa kanye nokusatshalaliswa kwayo yonke imikhiqizo evezwe kuleli khathalogi.
Ukusekelwa Kwezobuchwepheshe Kumahhala
Sinikeza ukwesekwa kwamahhala kwezobuchwepheshe kanye nesoftware yokufaka isicelo kuwo wonke amakhasimende. Lokhu kungahle kusuka ekukhetheni umkhiqizo wohlelo olungajwayelekile kuya ekwenzeni isifundo sokuvikela.
Langaphambilini I-DAM1 Series Thermal Overload Operation Molded Case Circuit Breaker (Uhlobo olungaguquki)
Olandelayo: I-DAM3-250 MCCB Case Circuit Breaker Ephukile
4 Pole Mccb wesifunda Breaker
usayizi we-compact mccb
din wesitimela mccb
usayizi omncane mccb
I-DAM3-250 MCCB Case Circuit Breaker Ephukile
I-DAM3-400 MCCB Case Circuit Breaker Ephukile
I-DAM3-630 MCCB Case Circuit Breaker Ephukile
I-DAM3-1000 MCCB Case Circuit Breaker Ephukile
I-DAM3-1600 MCCB Case Case Circuit Breaker